Mashiinka Tani waa nooca si toos ah oo buuxda ka kooban yahay mid mashiinka encrusting, mid mashiinka Gurdanka iyo mid mashiinka saxaarad-simaya. By kordhaya ama beddelo qalabka optional iyo qalabka, line-soo-saarka taas oo sidoo kale loo isticmaali karo in ay soo saaraan cunto kale / cunto fudud / dubo badan.
4000 ~ 6000 kumbiyuutarada / hr
2000 ~ 4500 gabal / hr
3000 ~ 7000 kumbiyuutarada / hr
1) badbaadi kharashka shaqada mustaqbalka fog. Awood u samaynta cuntooyin kala duwan
2) qiimaha macquulka ah iyo awood sare.
3) Easy hawlgalka, nadiifinta, ururinayo, iyo dayactirka.
4) qalabka kala duwan laga dalban karaa waxyaabaha encrusting ah.
Previous: Mashiinka digaag qaadashada coxinha Brazil si toos ah
Next: Mashiinka qaadashada mochi jalaato automatic
Maamoul U samaynta Machine
Maamoul Samaynta Machine
Maamoul israac Line
Maamoul Small Machine
kubba automatic kibbeh Mashiinka qaadashada kubbeh
Mashiinka digaag qaadashada coxinha Brazil si toos ah
Mashiinka midabka qaadashada buskut double Automatic